चलिरहेको स्कुटरमा कांग्रेस युवा नेतृको घाँटीको सिक्रि तानेपछि…. – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/चलिरहेको स्कुटरमा कांग्रेस युवा नेतृको घाँटीको सिक्रि तानेपछि….
काठमाडौ । बाँकेमा स्कूटरमा गइरहेकी महिला नेतृ माथि आ’ क्र ‘मण भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेकी युवा नेतृ तथा महिला संघ कोहलपुर नगरकी कोषाध्यक्ष दिपा बस्नेत माथि भएको हो । स्कूटरमा कोहलपुर तर्फ गइरहेको बेलामा उनलाई मोटरसाइकलमा आएका युवाहरुले यो घटना घटाएका थिए ।
सोमवार नेपालगन्ज देखि कोहलपुर जाने क्रममा साँझ पख जानकी गाउँपालिकाको गनापुरमा पर्ने पिप्रहवा नजिक उनी माथि अ ज्ञात युवाहरुले आ’ क्र’मण गरेको प्रहरी समक्ष उनले बताएकी छन् ।